नेपालमै पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण ।।
भक्तपुरका बलराम नागाको कलेजो प्रत्यारोपण गर्दै नेपाली चिकित्सकहरुले महत्वपूर्ण सफलता हात पारेका छन् । नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपण भएको यो पहिलो पटक हो ।
मानव अंग प्रत्यारोपन केन्द्र, भक्तपुरले बुधबार दिउँसो झण्डै आठ घण्टा लगाएर भक्तपुरका ३६ वर्षीय नागाको कलेजोको सफल प्रत्यारोपण गरेको छ । उहालाई ४१ वर्षीया दिदी सानुमाया लागेजुले कलेजो दान गर्नुभएको थियो । बुधवार दिउँसो १२ बजे सुरु भएको उक्त शल्यक्रिया रात ८ बजे सम्पन्न भएको थियो ।
चिकित्सकहरुले सानुमायाको कलेजोको करिब ६० प्रतिशत भागलाई काटेर बलरामको कलेजो भएको ठाउँमा प्रतिस्थापन गर्नुभएको छ । अहिले दुवैको स्वास्थ्यमा सुधार आएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
प्रत्यारोपणमध्ये सबैभन्दा जटिल मानिने कलेजोको प्रत्यारोपणका लागि दक्षिण कोरियाको सियोलस्थित सामसुङ मेडिकल सेन्टरबाट सात विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक पनि नेपाल आएका थिए । नेपाल चिकित्सकको नेतृत्व केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुका चन्द्र श्रेष्ठ र मुटु शल्य चिकित्सक डा. मोहनदेव भण्डारीले गर्नुभएको थियो ।
एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा झण्डै ६० प्रतिशत कलेजो रक्सी तथा हेपाटाइटिस बी र सी का कारण कारण विग्रने गर्दछ । त्यस्तै, विश्वमा धनी देशहरुमा हेपाटाइटिस सी तथा मधुमेहका कारण कलेजोमा बोसो जमेर कलेजो विग्रने गर्दछ ।
त्यस्तै, नेपालमा हरेक वर्ष हजार जनाको कलेजो फेल हुने गर्दछ भने गएको दुई वर्षमा मात्र भारतमा गएर कलेजो प्रत्यारोपन गर्नेको संख्या ४८ को हाराहारीमा रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।